Matory ny mpivarotra China Manufacturer
Description:Pet Comfort Heating Mat,Toeram-panafana famonoana hafanana,Matanjaka Matanjaka Matanjaka Mat
Home > Products > Reptile Heat Pad > Under Tank Pad > Matory ny mpivarotra
Ny fitaovana fanamainana thermostatika, fitaovana fanamafisana ny fitaovana famolahana ho an'ny indostriam-piterahana, dia fitaovana tsara indrindra ho an'ny PTC ho an'ny saka sy alika mafana. Mamoaka lavitra ny infrared, mamokatra rivotra mafana amin'ny fampiroboroboana farafahakeliny. Izany dia maharitra maharitra ary mampiasa hery faran'izay kely kokoa noho ny teknolojia nentim-paharazana. Noho ny teknolojia farany momba ny fiarovan-tenan'ny toetrandro Positive Coefficient, dia ahafahantsika mitazona ny biby fiompy mandritra ny 24 ora amin'ny ririnina tsy misy fanaraha-maso amin'ny fomba mahazatra. Raha tsy misy ny PVC, tsy misy rano, ary tsy misy tsiranoka.42 ℃ siface temperature, mahatonga ny biby fiompy ho mafana sy cosey amin'ny ririnina.It dia mety ho an'ny biby isan-karazany, anisan'izany ny saka .dogs.turtles sy ny reptiles.ntsika koa manolotra fanompoana maoderina. manome anao ny paddle ideale fafana. Ary efa nahazo fankatoavana ny CE, RoHS, Ul, ETL, etc.
Nankasitraka ny tombontsoanao izahay!
Pet Comfort Heating Mat Toeram-panafana famonoana hafanana Matanjaka Matanjaka Matanjaka Mat Pet Indoor Heating Mat Electric Indoor Heating Mat Underfloor Heating Mat Plant Heating Mat Electric Heating Mat